vendredi, 19 juin 2020 22:24
Bekily - Androy: Zandary nitondra olona voarohirohy amina halatr’omby nisy nitifitra teny an-dalana
Nitrangana halatr’omby tany Bemanondrotsy Kaominina Ambatosola, Distrika Bekily ny tapaky ny volana may 2020. Lehilahy roa ahiahiana ho ambadik’izao halatr’omby izao no nosamborin’ny Zandary manao fampandriantany ny 18 jona 2020, niainga avy amin’ny fanomezam-baovao voarain’ny Zandary.
Teny an-dalana hitondra ireo olona voarohirohy ireo amin’ny moto hiazo eny Bekily io 18 Jona io ireo Zandary ireo no nisy nitifitra tokony tamin’ny 05 ora hariva. Maty voatifitra tamin’izay ny iray tamin’ireo olona nosamborina voarohirohy tamin’ny halatr’omby, ary naratra ny Zandary iray.
Efa tsaboina ao Bekily ilay Zandary maratra. Efa tonga ao Bekily ihany koa ireo namany sy ilay olona iray ahiahiana sisa tsy maty. Efa any amin’ny tranom-paty ao Bekily ny razana.
Mitohy ny famotorana.
vendredi, 19 juin 2020 22:19
Nanakorontana sady nanambana basy: Adjidà zandary iray nidoboka eny Antanimora
Natolotra ny Fitsarana ny 18 jona 2020 ary dia notazomina am-ponja vonjimaika ao Antanimora Antananarivo ny zandary iray milanja galona Adjidà izay nanakorontana sady nanambana basy ireo namany tany ampamitana iraka nanao tantsoroka ireo namany eo amin’ny sakana ara-pahasalamana teo Ambatolaona-Manjakandriana, lalam-pirenena faharoa.
Nentin’ny hamamoana izy ny 10 jona 2020, ka sady nakorontany no nandrahona hitifitra tamin’ny basy teny an-tanany. Nandray andraikitra avy hatrany ireo lehibe mpifehy azy nanokatra fanadihadiana ary nitondra ny raharaha teny amin’ny Fitsarana.
Natolotra ny Fampanoavana omaly dia ny fitazomana am-ponja vonjimaika no didy savaranonando nivoaka.
vendredi, 19 juin 2020 22:17
Vono olona miaro kolikoly: Ben’ny tanàna iray sy ny lefiny nidoboka am-ponja
Voarohirohy ho mpiray petsapetsa tamin’ny fanafihana mitam-basy fiara kamiao mpitety tsena ny 07 may 2020, izay nahafatesana olona, ny Ben’ny tanànan’i Vohimanga, Distrikan’i Bekily sy ny lefiny. Tsy hita nanjavonana izy ireto taorian’ny loza, fihetsika izay nampiahiahy ny havan’ny maty ka nahatonga ireto farany nametraka fitoriana.
vendredi, 19 juin 2020 21:58
Vangaindrano: Zandary iray, kilasy voalohany, tsy hita nanjavonana taorian’ny fandikan-dalàna nataony
Fitakiam-bola mitentina 1 340 000 Ariary mba handaminana raharaham-pitsarana, nanokafana fanadihadiana no isany anenjehana an’ity zandary ity. Tranga izay niseho tamin’ny 11 jona 2020. Nanomboka teo no tsy namonjy toeram-piasana tao Anilobe ilay zandary, mitondra galona kilasy voalohany.
Tokony natolotra ny Fampanoavana ny 15 jona 2020 ny raharaha mahakasika azy, nefa tsy nipoitra izy. Nokarohina tany amin’ireo toerana noheverina fa tokony ahitana azy, fa tsy hita ary tsy tratra antso. Mitovana ny fandikan-dalàna vitany, amin’ny tsy fandehanany nefa tsy nahazoany alalana.
vendredi, 19 juin 2020 21:51
Sambava: Voasambotra ilay « Adjudant Chef » sandoka
« Adjudant Chef » ny galona isalorany ary mitonona ho lefitry ny komandin’ny brigady izy, entiny anaovana ny asa ratsiny. Olona tsara sitrapo no nampandre ny fisian’ity lehilahy iray, 50 taona misandoka ho zandary ity.
Roso tamin’ny fikarohana sy fisamborana azy avy hatrany ny Zandary vao nahazo ny vaovao. Voasambotra ary tsy nisy fanoherana ny fisamborana azy ny tolakandron’ny 18 jona 2020. Nahitana akanjo « vert armé », galona « Adjudant Chef », « béret noir », lobaka manga tanora ary kiraro tao anaty kitapony rehefa nosavain’ny Zandary avy ao amin’ny kaompania Sambava.
Notazomina atao famotorana ilay rangahy, ary hatolotra ny Fitsarana ao Antalaha aorian’izay.
vendredi, 19 juin 2020 21:41
Tsaraitso - Betroka: Dahalo vao avy nigadra tratra ambodiomby nangalatra omby
Tra-tehaka ambodiomby teo ampangalarana omby tao Edazo, Fokontany Akomanga, Kaominina Tsaraitso, Distrikan’i Betroka ity dahalo, vao avy nivoaka ny fonja ity, ny alin’ny 17 jona 2020.
Teny an-dalana ho entina hiazo ny biraon’ny Brigadin’ny Zandary Betroka ilay dahalo no voalaza fa nanararaotra hitsoaka, rehefa tonga tao amin’ny toerana antsoina hoe : Kininitokana. Tamin’izay izy no voatifitra ka maty.
vendredi, 19 juin 2020 21:11
Mahabo-Betroka: Fokonolona telo sy dahalo telo no namoy ny ainy vokatry ny fifandonana
Notafihina andian-dahalo maromaro ny tanànan’i Manevy Kaominina Mahabo, Distrika Betroka ny alin’ny 17 jona 2020.
Efa niambina ny Fokonolona tao Manevy ka raha vao tafiditra ireo malaso dia raikitra ny fifandonana. Vokany, dia maty ny telo tamin’ireo dahalo, lavo ihany koa ny telo tamin’ireo Fokonolona. Tsy nisy omby lasa.
Nanokatra fanadihadiana sy manao hazalambo ireo dahalo nitsoaka ny Zandary avy ao Mahabo sy ny avy amin’ny USAD (Unité Spéciale anti-Dahalo).
vendredi, 19 juin 2020 19:10
Antanetibe Mahazaza: Zazalahikely 9 taona matin’ny herinaratra
Main’ny herinaratra ary maty tsy tra-drano ny zazalahikely iray 9 taona. Tao Antsaingona, Fokontany Ambohijatovo, Kaominina Antanetibe Mahazaza, Distrika Ambohidratrimo, Faritra Analamanga no niseho ity loza ity ny 17 jona 2020 teo amin’ny fiandohan’ny tolakandro.
Tariby mitondra herinaratra mahery vaika, nidaraboka tamin’ny tany no nitera-doza. Tsy nisy azo natao nanavotana ilay zaza, na notapahana haingana aza ny herinaratra mandalo amin’ilay tambazotra.
Tonga nanao fizahana ny zava-misy ny Zandary avy ao amin’ny « Poste Avancé » Mahazaza niaraka tamin’ny dokotera avy amin’ny CSB-II, ary ny Ben’ny tanàna ao Antanetibe Mahazaza. Taorian’ny fanamarinana dia nalain’ny fianakaviana ny razana.
vendredi, 19 juin 2020 18:54
« Nosy Malagasy»: Nisy hetsi-pitakiana nanoloana ny masoivoho Frantsay eo Ambatomena
Nisy sorabaventy sy fanambarana nataona andian’olona mitaky ny hamerenana amin’i Madagasikara ireo « Nosy Malagasy» androany atoandro teo anoloan’ny masoivoho Frantsay eo Ambatomena Antananarivo.
Anisany nitarika sy nandray anjara tamin’ity hetsika ity ny antoko Otrik’afo, ireto farany izay nampahatsiahy fa « manakaiky ny datin'ny 26 jona 2020, fotoana nampanantenain'ny Filoha Andry Rajoelina hiverenan'ireo « Nosy Malagasy» ireo amin'ny Malagasy ; koa mila asa izany fa tsy kabary fotsiny ».
Nizotra tamim-pilaminana ny hetsika ary nahazoana alalana ihany koa.